बिज्ञान/प्रविधि – Page2– JanaSanchar.com
पेनड्राइभबाट डिलिट भएको डाटा कसरी फिर्ता ल्याउने ?
यूएसबी पेनड्राइभले हामीलाई धेरै सजिलो बनाएको छ। आफ्ना महत्वपूर्ण डाटाहरु लिएर हामी जहाँ पनि जान सक्छौँ। पोर्टेबल हार्डडिस्कको तुलनामा सस्तो र सहज हुने कारणले यो अहिले महत्वपूर्ण डिभाइस बनिसकेको छ। यसरी हाम्रा महत्वपूर्ण डाटाहरु भएको पेनड्राइभबाट कहिलेकाँही अन्जानमा सबै डाटाहरु डिलिट भइदिने समस्या पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यदि..
अमेरिकास्थित जोर्जिया राज्यको विश्वाविद्यालय अन्तर्गतको इन्ष्टिच्युट फर बायोमेडिकल साइन्समा कार्यरत नेपाली युवा बैज्ञानिक डा.सुदिप खड्का संलग्न टोलीले इबोलाको औषधी पत्ता लगाएको सोधपत्र प्रतिष्ठित antiviral research जर्नल मा प्रकाशित भएको छ । यो आविष्कारले इबोलाको महामारी फैलिए त्यसको रोकथाममा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेे विश्वास..
आजदेखि भाइबरबाट ५२ वटा देशमा नि:शुल्क फोन गर्न सकिने यसरी गर्नुस निशुल्क फोन जानकारीको लागि सक्दो share गर्नुहोसभाइबरबाट राति ८ बजेदेखि १० बजेसम्म विभिन्न ५२ मुलुकहरुमा निशुल्क फोन गर्न सकिने भएको छ। भाइबर आउटबाट ५२ मुलुकका ल्याण्डलाइन वा मोबाइल फोनमा १० मिनेटसम्म निशुल्क कुरा गर्न सकिने छ। अफर सेम्टेम्बर १९ अर्थात असोज ३ गतेसम्म लागू..
‘काठमाडौंमा बसेर पढ्दै गरेकी एक युवतीको घरमा विवाहको कुरा आयो। उनको कसैसँग प्रेम सम्बन्ध थियो। घरमा प्रेमीको कुरा बताउन सकेकी थिइनन्। दबाब बढ्दै गएपछि भने आमालाई मात्र भनिन्। आमाबाट त्यो कुरा बुवासम्म पुग्यो। उनले स्वीकारेनन् र खोजेकै केटासँग विवाह गर्न भने। धेरै कर गरेपछि उनी विवाह गर्न तयार भइन्। आफ्नो प्रेमीलाई सम्झाउने हिम्मत..
लोकप्रिय मेसेजिङ एप ह्वाट्सएपको नक्कली भर्सन १० लाख भन्दा धेरैले डाउनलोड गरेका छन। गुगल प्ले स्टोरमा देखा परेको नक्कली ह्वाट्सएप त्यहाँबट हटाइनुअघि १० लाख भन्दा धेरै एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले डाउनलोड गरिसकेका हुन् । Update WhatsApp Messenger नामक उक्त नक्कली ह्वाट्सएपमा विभिन्न विज्ञापन हुनुका साथै त्यसले प्रयोगकर्ताको डिभाइसमा इन्स्टल..
जुकरबर्ग किन गए चीन ? फुकुवा होला त चीनमा फेसबुक ?
एकवर्ष पश्चात फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग पुनः चीन भ्रमणमा पुगेका छन् । जुकरबर्गले बेइजिङको सिंघुआ स्कुल अफ इकोनोमिक्स एण्ड म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरुसँग भेटघाट गरेको तस्वीर फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन् । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट बजार चीनमा प्रवेश गर्ने सम्भावित अवसरको खोजी गर्दै जुकरबर्ग चीन भ्रमणमा गएको बताइएको छ ।..
सन् १९०५ को सेप्टेम्बर २७ तारिखका दिन जर्मनको भौतिक विज्ञान जर्नल ‘अन्नालेन देर फिजिक’मा एउटा सनसनीपूर्ण लेख प्रकाशित भयो । समय र स्पेस तथा पिण्ड र शक्तिलाई भिन्न मानिरहेको दुनियाँलाई यी तत्वहरू कसरी अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् भन्ने अवधारणा नौलो थियो । पिण्ड र शक्ति ई इजकल्टु एमसी स्क्वायर समीकरणले सम्बन्धित हुने, जहाँ शाब्दिक रूपमा ई..